Eray bixinta Xadiiska ‘Musdalaxul Xadiis’ Q. 3aad, (WQ: Sh. Cabdirisaaq Cabdiraxmaan Xasan Rakuub) | Baligubadlemedia.com
Eray bixinta Xadiiska ‘Musdalaxul Xadiis’ Q. 3aad, (WQ: Sh. Cabdirisaaq Cabdiraxmaan Xasan Rakuub)
Caaddil: qof aan been lagu aqoon waa in u warinaya xadiiska.
Cillo: waa sabab qarsoon oo xadiiska kala goynaysa in aanay jirin.
Daabbid: qofka xadiiska warinaya waa in uu xadiiska xifdisan yahay, culimadii xadiiska warin jirtay waxa la odhan jiray xufaad, sida Xaafid Ina Xajar oo kale, sida oo kale waa in uu ugu qoran yahay kitaab.
Culimada ku horraysa kala hufidda axaadiistu waxa ay isku waafaqsan yihiin axaadiista labadaa imaam soo guuriyeen in ay ku dhaceen sugnaasho la hubo, marka laga yimaaddo Bukhaari; Aadabul-Mufradka iyo Muslim; Muqadimadiisa, oo la sheego axaadiis aan sugnayn in lagu helay, labadaa tuduc wax aan ahayn oo ku jira waxa la isku waafaqsan yahay in ay sugan yihiin.
Xadiiska sanad ahaan Xasanka ah waxa ay ka siman yihiin xadiiska Saxeexa ah;Sanadka, Caaddilka, Shaadka iyo Cillada, se waxa uu kaga hooseeyaDaabbidka, waana sababta loo yidhi Xasan.
Xadiiska Marfuufa ah waa xadiis loo tiirinayo Rasuulka CSW.
Xadiiska Marfuucu waa xadiiska loo tiiriyo Rasuulka CSW oo la yidhaa Rasuulku sidaa ayuu yidhi, ama sidaa ayuu sameeeyey, sida oo kale isaga shakhsi ahaan lagu tilmaamo sida akhlaaqdiisi, dharkiisi, socodkiisi, fadhigiisi iyo habdhaqankiisi.
Maqduucu waa xadiis Taabici ka warinayo Rasuulka CSW.
Sharaxaadda ama tafsiirka uu Taabici ka bixiyo aayad iyo xadiis.
Hoos ka akhriso qaybta koowaad
Eray bixinta xadiiska “musdalaxul xadiis” Q.1aad
Eray bixinta Xadiiska ‘Musdalaxul Xadiis’ Q. 2aad
Talo iyo tusaaleba waa xaggiina
Bogga Faysbuugga: Cabdirisaaq Rakuub